Igwe Radial Drilling | | Radial Ogwe aka malite ịgba China Manufacturers
Ị nọ ebe a: Ulo1 / Radial Drilling Machine, Radial Ogwe aka malite ịgba, China Manufacturers
Tsinfa bụ ọkachamara soplaya & emeputa nke radial mkpọpu ala igwe na China.
Mgbe ihe eji arụ ọrụ arụ ọrụ dị arọ, ọ gaghị adaba ịkwaga, ọ na-esikwa ike ịchọta ebe etiti ahụ, ọ gaghị adabara nhazi na igwe na-egwu mmiri ma ọ bụ obere bench. N'oge a ọ dị mkpa iji igwe egwu radial, ihe eji arụ ọrụ anaghị agagharị ma na-akwagharị spindle, nke mere na etiti spindle kwekọrọ na etiti oghere igwe. A na-etinye igbe spindle na ogwe aka radial ma nwee ike ịkwaga ya na okporo ụzọ nduzi nke ogwe aka radial. Enwere ike ịmegharị ogwe aka radial gburugburu axis nke kọlụm ahụ, ya mere enwere ike idozi ọnọdụ spindle n'ụzọ dị mfe. Enwere ike ibuli aka ma wedata ogwe aka radial n'akụkụ kọlụm iji gboo mkpa nhazi dị iche iche. Mgbe ịghasịrị ọnọdụ spindle ahụ, igbe mpempe akwụkwọ, ogwe aka radial na kọlụm vetikal nke igwe na-egwupụta radial ga-ejikọ ya n'ụzọ pụrụ ịdabere na usoro mgbochi ha, nke mere na akụrụngwa akụrụngwa na-etolite usoro siri ike iji hụ na akụrụngwa igwe ahụ nwere oke nkwụsi ike na ọnọdụ ziri ezi n'okpuru omume nke ịcha ọnwụ.
Radial mkpọpu ala igwe isi ọrụ iwebata:
Radial ogwe aka mkpọpu ala igwe na-bụ-eji maka mkpọpu ala, na-agwụ ike, na ịme ọpịpị, casing, countersinking, reaming, The akụrụngwa na ọtụtụ-eji machining, ebu n'ichepụta na ndị ọzọ ọrụ
Dabere na clamping na nnyefe mode, ọ na-ekewa n'ibu radial na haịdrọlik radial
Ogwe radial na-agbagharị ogo 360. Ogwe aka nwere ike ịgagharị na ala. Isi anụ ahụ nwere ike ịmegharị aka ekpe na aka nri yana ogwe aka radial maka mfe ịnọ
Ọdịdị dị mfe, dị mfe ịrụ ọrụ.
Radial mkpọpu ala igwe video:
Radial mkpọpu ala igwe maka ire:
Ihe oyiyi na nkọwapụta
Radial Ogwe aka malite ịgba Press Z3040
Max. mkpọpu ala dayameta:40mm
Max. mkpọpu ala dayameta:50mm
Max. mkpọpu ala dayameta:63mm
Main moto (kw): 5.5kw
Radial Ogwe aka malite ịgba Press Z3080
Max. mkpọpu ala dayameta:80mm
Radial ogwe aka akuakuzinwo pịa atụmatụ:
Ọdịdị dị elu nke ntụgharị
Fuselage nkedo nwere nnukwu ike
Olee otú iji rụọ ọrụ radial mkpọpu ala igwe
1 Tọrọ ntọala. Dị ndị dị n'elu Z3050 ga-ahụrịrị na ntọala siri ike iji zere ihe ize ndụ nke ịwụfu.
2 Hichaa mmanụ na-emebi nchara na akụrụngwa ma lelee mmanụ dị na akụkụ mmanụ ahụ
3 Ike, pịa isi ọkụ ọkụ, ike n'akụkụ niile nke akụrụngwa akụrụngwa, kwadebe maka ọrụ nke akụrụngwa igwe, gbanyụọ mgba ọkụ, akụrụngwa igwe na-agbanyụ. Gbaa mbọ hụ na ịdabere na igwe akụrụngwa.
4 Lelee ma usoro usoro usoro ike ga-abụ nke ziri ezi site na bọtịnụ spindle na-atụgharị na ntụgharị. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe megidere ya, dochie akara abụọ ọ bụla
5 Idozi worktable na isi na ndozi workpiece. Wụnye igwe egwu, wee bulie ogwe aka radial gaa n'ogologo achọrọ, gbanwee aka aka, dozie ntutu isi na ọnọdụ achọrọ, igbachi ogwe aka na isi ala, dabere na ụdị akụrụngwa, na-eji hydraulic ma ọ bụ mkpọchi igwe.
6 Jiri bọtịnụ ndepụta rụọ ọrụ maka nhazi.
7 Akụrụngwa nwere sistemụ jụrụ oyi. Ọrụ ịgbanwee ga-emeghe obi jụrụ mgbapụta na kpatụ tinyekwa nke njupụta anwụrụ ka mmezi na workpiece nke obi jụrụ.
8. Mgbe ịmechara nhazi ahụ, mechie mkpọpụta radial, ma hichapụ ogwe aka radial na kọlụm na-eduzi okporo ígwè na ezigbo gauze na mmanụ ugboro ugboro iji zere mmebi.
Ọ bụrụ na ịchọrọ PDF ma ọ bụ PPT akwụkwọ ọrụ gbasara radial drilling machine, biko kpọtụrụ ndị ọrụ ahịa
Radial mkpọpu ala igwe price
Banyere ọnụahịa igwe eji egwu igwe radial, dịka ụdị dị iche iche si dị, ọnụahịa ahụ dịgasị iche nke ukwuu. N'ihi na nkịtị radial mkpọpu ala igwe nkọwa, kpọmkwem price nso bụ 3000USD ~ 50000USD. Nnukwu olu ịzụta, ọnụahịa dị ọnụ ala karịa. Na mgbanwe mgbanwe mgbanwe ga-emetụta ọnụahịa ahụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ọnụahịa ziri ezi, ịkwesịrị ịkpọtụrụ onye na-ere ahịa maka nkwenye.
Gịnị bụ radial mkpọpu ala igwe? akụkụ, nhazi, ihe mejupụtara ya.
Ihe osise dị n’aka ekpe bụ eserese eserese nke igwe na-agbapụ aka na-aga radial, nke a na-agụnye akụkụ isii:
Ejiri iji kwado ma dozie akụrụngwa igwe. A na-etinye ogidi kwụ ọtọ na ntọala ahụ, nke kwesịrị ịkwado ya na ala iji hụ na nkwụsi ike nke mkpọrọ radial.
2 Ogwe radial
Ogwe aka radial na-agbanye na kọlụm kwụ ọtọ iji kwado aka ekpe na aka nri nke igbe spindle. Radial ogwe aka nwere ike bugharia gburugburu kọlụm na ọ bụ isi akụkụ nke radial ogwe aka malite ịgba, nke adaba maka rụọ ịchọta dị ka ọnọdụ na-machined
Kọlụm etinyere na isi, na-akwado mmeghari nke ogwe aka radial. Ndu ịkpa ike pfụshia ụkporo madzụ
4 Igbe Spind
A na-etinye bọtịnụ isi ọrụ na igbe spindle. Onye na-ahụ maka ọrụ na-achịkwa ntụgharị nke ihe a na-egwu ala site na igbe spindle.
5 Tebụl na-ebugharị
N'ịga worktable na T uzo nke gwara workpiece
Enwere tumadi motọ abụọ, otu dị na kọlụm ahụ, maka ebuli ogwe aka. Otu dị n’elu igbe spindle, na-ahụ maka ntụgharị ntụgharị.